Tanora TIM : mamolavola mpamokatra ho an’ny fampandrosoana | Site officiel du collectif GTT Gasy Tia Tanindrazana
Ny hamerina ny maha-izy azy ny tanora Malagasy no isan’ny tanjon’ny tanora Tiako I Madagasikara araka ny fanazavan’ny mpandrindra eto Analamanga. Dieny mbola erotrerony dia amporisihina ireto tanora ireto hijoro amin’ny maha-izy azy mba tsy hatao saribakoly any aoriana. Hamoraina ihany koa ny fazahoan’izy ireo fampiofanana samy hafa mba ho hery mpamokatra hiatrika ny fampandrosoana an’i Madagasikara. Ny fiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA dia efa fantatra fa hitondra vahaolana eo amin’y krizy lalovan’ny Firenena.
Sary Tanora TIM
Efa mibanjina sahady ny folo taona roapolo taona manaraka izany ny TIM tanora manomboka izao ka manome vahana ny fampiofanana arak’asa sy ny fanatanjahan-tena ho fanamafisana izay traikefa mbola mila zaraina amin’ny mpiara-belona.
Fanatontoloana sy ny tanora …
Maro ireo tanora tonga saina amin’izao fotoana fa tsy vitan’ny fanarahahana ny hiaka farany amin’ny fivoaranan’ny any ivelany ny momba ny tanora. Izao krizy lalovan’ny Malagasy izao dia tokony mitondra fampianarana ho an’ ny rehetra. Ny firongatry ny tranonkala sy ny hainoamanjery maneho ny andavanandron’ny tanora any ivelany dia tokony hanamora ny fandraisana andraikitra eo amin’ny tsirairay indrindra amin’ny fiatrehana ny tohin’ny tolona ho famerenana ny ara-dalàna fa tsy hakan-tahaka ny fitondran-tena vahiny izay manalavitra ny soatoavina Malagasy.